सात महिनामा तीन अर्बका चेक बाउन्स: के छ कारबाही ? हेर्नुहाेस् – Biswas News
सात महिनामा तीन अर्बका चेक बाउन्स: के छ कारबाही ? हेर्नुहाेस्
विश्वास संवाददाता	 Mar 3, 2018 213
काठमाडौं – गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानमा खटिनुपर्ने काठमाडौं प्रहरीको अधिकांश समय पछिल्ला दिन ‘चेक बाउन्स’का उजुरी छानबिनमा बित्ने गरेको छ । चेक बाउन्सका उजुरी बढेपछि प्रहरीको ठूलो शक्ति छानबिनमा लाग्नुपरेको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ ।